HTC သည်ယခုနှစ်ထုတ်ကုန်သစ်များကိုထုတ်လုပ်မည် Androidsis
ယခုနှစ်တွင် HTC သည်ထုတ်ကုန်သစ်များထုတ်လုပ်မည်
ထိုင်ဝမ်နှစ်ကကောင်းကောင်းမစနိုင်သေးဘူး။ ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တင်ဆက်ခဲ့သော၎င်း၏ထင်ရှားသော HTC One M9 မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိသည်။ The HTC One M9 သည်ကြီးမားသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည် သို့သော်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလူအများစုအတွက်၎င်းသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်နိမ့်ကျသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ HTC သည်စျေးကွက်ကိုဆက်လက်ရယူလိုပြီးအခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှခွဲတမ်းများကိုရယူလိုသောကြောင့်ယခုနှစ်ကုန်မတိုင်မီထုတ်ကုန်အသစ်များစတင်မည်။ DigiTimes မဂ္ဂဇင်းက၎င်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီမှသင်ကြားရန်များစွာရှိကြောင်းသူတို့ကအတည်ပြုသည်။
လက်ရှိအလံသည်ကြီးမားသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည် Android M ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည် လာမယ့် Android version ကိုရရှိနိုင်ပေမယ့်စားသုံးသူအများစုအတွက်အထူးသဖြင့်ကဏ္ in ရှိအထူးပြုစာနယ်ဇင်းများအတွက်ခါးသီးလှတဲ့အရသာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ Samsung သည် Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့၏ရောင်းအားကြောင့်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့ပြီး Samsung နှင့် ပတ်သက်၍ ပြိုင်ဘက်ကင်းကြောင်းထင်ရသည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ HTC က အမှုအရာပြောင်းလဲချင်တယ်နှင့် ယခုနှစ်မကုန်မီတွင်စမတ်ဖုန်းအသစ်များစတင်မိတ်ဆက်ရန်စဉ်းစားနေသည်.
အရင်းအမြစ်များအရလက်ရှိကုမ္ပဏီ၏စီအီးအို Cher Wang ကအစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယခုနှစ်မကုန်မီတွင် Terminal နှင့် Device အသစ်များကိုစတင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူက၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသူမပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းအသစ်များဖြစ်မဖြစ်၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ရှိပြီးသားအကွာအဝေးအောက်ရှိပစ္စည်းတစ်ခုစီဖြစ်မဖြစ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရှိနေသည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်ဝမ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှထုတ်ကုန်မျိုးဆက်သစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကိုစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။ ဒီပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာဖြန့်ချိမလားဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စျေးကွက်တခုခုမှာရောင်းချမှာလား။ ပြီးတော့သင်, မင်းဒါကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » ယခုနှစ်တွင် HTC သည်ထုတ်ကုန်သစ်များထုတ်လုပ်မည်
BBM သည် Beta ဗားရှင်းရှိပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်
အထူးကုကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အဆိုအရယခုနှစ်အကုန်တွင် Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့၏ရောင်းအားသည်ယူနစ်သန်း ၅၀ အထိရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်